Doorka Goleyaasha Deegaanka ee Abuurista Adeeg Bulsho oo Hufan. WQ: Axmed Nuur Muuse | Gacanlibaaxnews
Doorka Goleyaasha Deegaanka ee Abuurista Adeeg Bulsho oo Hufan. WQ: Axmed Nuur Muuse
November 6, 2020 - Written by C M
Jamhuuriyadda Somaliland (JSL) waa dalka qudha ee ku yaalla Geeska Afrika ee ay doorasho toos ah oo daah-furani ka dhacdo. Taas awgeed, JSL waxa lagu tiriyaa in ay ka mid tahay hormuudka doorashooyinka iyo siyaasadda ku dhisan xilwareejin nabdoon ee waddamada Afrika. Walow waayadan dambe Somaliland lagu canaanto doorashooyin mudo-dhaafay; xil-hayeyaashii Goleyaasha Deegaanka (GD) iyo Xeer-dejintu (XD) ba ay wali iska dul hawaaraan kuraastii iyada oo muddo-xileedkoodii dhammaaday. Ta se ugu wayn ee ay JSL ku tahay hormuudka Geeska Afrika marka ay timaaddo doorasho iyo dawladnimadu waa: sida ay salka ugu dhigtay hannaan dawladnimo oo ku dhisan codbixin, xisbiyo badan iyo siyaasad la saadaalin karo oo qaangaadhay.
Wakhtigan, waxa jirta fursad wayn oo mudan in xil culus la iska saaro xulista, kala-reebista iyo igmashada xildhibaannada GD ee doorashada soo socota. Haddii la rabo in laga fogaado dhibaatooyin dhaqaale, siyaasaded, shaqaale, musuqmaasuqa iyo qabyaaladeed ee ragaadiyay goleyaashii hore, waa in maanta laga hawl galaa. Casharradii laga bartay labadii gole ee hore waa in loo adeegsado in gefafkii lagu saxo, lana hagaajiyo habka loo marayo doroashada, maamulka iyo hoggaanka GD.
Alle ka cabsi iyo dhaqan diineed: waa in uu yahay qof masuuliyaddii Eebbe ka soo baxay, diintu na u tahay dabar ka qabanaysa dhammanba waxii eebbe xarimay. Waa in uu yahay qof aqoon dheer leh oo nolol dambe iyo xisaabta Aakhiro ku baraarugsan.
Garasho: ma aha in qofku jaamacad ka soo baxo uun, se waxa habboon in uu yahay qof garasho, garaad kore iyo il-dheeraan leh.
Daacadnimo: qofka xil-raadiska ah waa in la jirrabaa, oo dhan kasta laga eegaa, iyada oo la baadhayo daacadnimadiisa, cibaadadiisa iyo runtiisa. Waxa la eegi karaa nololshiisii hore, iyada oo la baadhayo in ay jirto xaalada hore oo nololshiisa ka mid ah oo laga dheehan karo daacadnimo iyo run-sheegnimo.
Tacab: Waa in uu noqdo qof si madax-banaan u tabcaday nolol, lana arki karo in uu noloshiisa maamushay oo aanay dayac iyo baahiyi ka muuqan. Ugu horreyn, waa in uu yahay qof hanti leh, oo baahidii qoyskiisa iyo carruurtisa dabooley, ama arimaha nololshiisa iyo qoayskiisa u maareysan kara si ka madax-banaan hantida ummadda. Waa in aanay habayaraatee dhici karin in uu wax soo moodo hantida ummadda, oo hunguri iyo damac toonna aan laga fileyn.
Waaya-aragnimo: waa in uu lahaadaa karti hawl-qabad, oo uu yahay qof hore u soo shaqeeyay, kuna suntan maamul iyo hoggaamin wanaagsan.
Naxariis: qof danta guud iyo daryeelka bulshada ka horumariya hawlhihisa, una dhibirsan taageeridda dadka jilicsan iyo saboolka.
Hal-adayg: Qof u adkaysan kara hawsha iyo difaaca xaqa muwaadiniinta, oo gudan kara xilkiisa xilli adag iyo xili degen ba.
Aaminsan sinnaanta iyo caddaalada: Qof ka dheer takoor, kala faquuq iyo qabyaalad, oo dhammaanba bulshada JSL u arka hal unug oo isku qoys ah.
Go’aan qaadasho: qof hadalkiisa iyo ficilkiisu iswaafaqsan yihiin oo go’aan ka uu qaato fulin kara. Sidoo kale, waa in uu lahaadaa awood uu ku bilaabo kuna jiheeyo bixinta adeegyada iyo go’aaminta iyo hirgelinta mashaariicda lagu dhammaystirayo dawladnimada.
Islaxisaabtan daahfuran: qof u dhego nugul islaxisaabtanka, ogna in bulshadu eegayso.
Xubinta GD ee astaamahaas kor ku xusan laga helo, lagu na xusho oo ay dhab ka tahay dareenka ah in uu bulshada u adeego, waxa uu noqonayaa ‘mujaahid bulsheed’. Sida halgamayaashii SNM uga dhiidhiday dulmigii iyo xaqdarradii dawladdii militariga ahayd ee AF-weyne, ayaa uu isna ugu kacayaa in uu bulshada saboolnimada iyo daruufaha adag ee nololeed ka saaro. Taasi marka ay timaaddo, GD waxa ay noqonayaan hawlbowlaha bulshada; waxayna noqon karaan kuwa uga galaangal dhaw shacabka dawladda dhexe. Bal se, taasi waxa ay imanaysaa marka ay kalsooni ka kasbadaan dadka rayidka ah, abuuraanna adeeg-bulsho oo hufan.
Iyada oo ay socdaan deddaal lagu rabo in dib u eegis iyo kaabis lagu sameeyo xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka (Xeer Lr. 23) oo la ansixiyay sannadkii 2002, ayay tahay in aqoonyahanada iyo daneeyayaasha horumarka bulshaduba dodo cilmiyeysan geliyaan habka ugu habboon ee loo wajihi karo isbeddal lagu sameeyo sida haatan loo wajaho doorashada golleyaasha deegaan. Arrimaha ugu mudan ee ay tahay in hoos loo eego waxa ku jira doorashada duqa magaalooyinka, gobollada iyo ku xigeenadooda oo u mudan in si toos ah loo doorto. Sidoo kale waxa iyana wanaagsanaan lahayd in magaalooyinka laftooda wax-waaxyo loo kala jajabiyo, si maamulka iyo adeegga ba loogu sii dhaweeyo dadka, isla-xisaabtankuna u noqdo mid daah-furan. Kalsoonida iyo lexejeclada bulshada ayaa iyana sidan ku kobci karta.